Tag: uncertainty | Martech Zone
Wedzera Mukana Wako Zvemukati Zvirikuenda Viral neaya mashanu Maitiro
Svondo, July 6, 2014 Svondo, July 6, 2014 Douglas Karr
Isu takagovana mamwe infographics pazvinhu zvehutachiona zvemukati uye ini ndinogara ndichizeza nekusundidzira hutachiona sechirongwa. Zvemukati mehutachiona zvinogona kuunza chiziviso cherudzi - tinozviona izvo kazhinji nemavhidhiyo. Zvisinei, handisati ndamboona chero munhu achirova kunze kwepaki nguva dzese. Vamwe vanoedza kuomarara, vamwe vanoshaya… zvirokwazvo mubatanidzwa wetarenda uye rombo rakanaka iro rinokwidiridza zvemukati zvemukati wako virally. Izvo zvakati, ndinotenda matekiniki anoshandiswa pakutarisisa